चट्याङबाट कसरी बच्ने ? यस्ता छन् विज्ञका सुझाव | Makalukhabar.com
चट्याङबाट कसरी बच्ने ? यस्ता छन् विज्ञका सुझाव
जेठ २७, काठमाडौं । चट्याङ प्राकृतिक प्रक्रिया हो । चट्याङ एक प्रकारको ‘इलेक्ट्रिक चार्ज’ हो। बादलका विपरीत दिशा आपसमा जुधेपछि त्यहाँ करेन्ट उत्पन्न हुन्छ र त्यसबाट ठूलो आगोको मुस्लो निस्किन्छ । यसैलाई ‘बिजुली चम्केको’ भनिन्छ । अहिले मात्र होइन, मानव जाति अथवा जीवजन्तुको पृथ्वीमा अस्तित्व हुनुभन्दा अगावै चट्याङ पर्ने गरेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
अहिलेको मौसम चट्याङका दृष्टिले निकै जोखिमपूर्ण छ । चैतदेखि असार मसान्तसम्म नेपालमा चट्याङको बढी जोखिम हुने गर्दछ ।
विसं २०६८ देखि २०७४ सम्म गरिएको अध्ययनमा नेपालमा हरेक वर्ष चट्याङकै कारण ११० ले ज्यान गुमाउँदै आएका छन् । सावधानी अपनाउन नसक्दा कतिपयले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ ।
यस्ता छन् चट्याङबाट बच्ने उपायः
चट्याङबाट बच्ने उपाय सावधानी हो। चट्याङबाट बच्न घरको बिजुली प्रवाह हुने ‘वायरिङ’मा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यसका लागि ‘अर्थिङ’ उपयुक्त माध्यम हो, जसले घरमा चुहावट भएको करेन्टलाई बाहिर जमिनसम्म पुग्न दिँदैन। अर्थिङमा एक प्रकारको ‘इलेक्ट्रिक यन्त्र’ जडान गरिएको हुन्छ। ‘अर्थिङ’ले बिजुली चम्किँदा निस्केको करेन्ट र घरको करेन्ट जोडिन दिँदैन। जसले गर्दा घर सुरक्षित हुन्छ।
घरका विद्युतीय सामानको अर्थिङ गर्दा टाढाबाट विद्युतीय तार र टेलिफोनका तारमार्फत आउने करेन्टबाट बचाउन सकिन्छ ।
घर बाहिर हुँदा खुला ठाउँमा रहेमा टाउको र खुट्टा जोडेर गोलो परेर बस्नुपर्ने हुन्छ । रुखको नजिक नबस्न, बिजुली र फोनको पोल, अग्ला भवन नजिक बस्नु हुँदैन । विद्युतीय सामग्री प्लगमा जोड्न र ल्याण्डलाइन फोनमा कुरा गर्नु हुँदैन । तर मोबाइल फोन भने चलाउन सकिन्छ ।
गाडीमा रहेमा सिसा लगाएर बस्नु पर्छ । धातुका गाडी सुरक्षित हुने भए पनि प्लाष्टिकका गाडी असुरक्षित हुन्छ । चट्याङ पर्ने समयमा खेतमा पानीमा काम गर्न र पौडी खेल्न पनि हुँदैन । घरभित्र बस्दा झ्याल र भित्ता नजिक बस्न हुँदैन । धाराका पानीमा करेन्ट आउनसक्ने भएकाले पानी नखेलाउँदा राम्रो ।
घरमा जडित सर्किटहरू बेला–बेला जाँच गरिरहनुपर्छ, कतै सर्किट लिक भएको छ भने चट्याङले हान्छ।
अग्ला टावरहरू चट्याङका सिकार हुन्। चट्याङबाट जोगाउन ती टावरमा विशेष किसिमले ‘अर्थिङ’ जोडिएको हुन्छ। तैपनि चट्याङले बेला–बेला टावरमा क्षति गरिरहेकै हुन्छ। यस्ता टावरको वरपर रहने घर तथा बस्ती बढी जोखिमपूर्ण हुन्छन्।
फिटनेस सम्बन्धी केही टिप्स
भाद्र २७ । वर्षामा पानी परिरहने भएकाले धेरैलाई बिहान–बिहान फिटनेस जान अल्छी लाग्न सक्छ । यतिबेला घरमै म्युजिक बजाएर तथा पहिले सिकेका स्टेपमा आधारित भएर व्यायाम गर्न सकिन्छ । - अहिले युट्युबमा पनि फिटनेसका बारेमा जानकारी दिइने भएकाले त्यसलाई हेरेर पनि सामान्य व्यायाम गर्न सकिन्छ । - पहिलेको तुलनामा... जारी राख्नुहोस...
यसरी खिच्नुस् उत्कृष्ट सेल्फी
भाद्र २२ । हुन् त आजभोली जो कोही पनि सेल्फी खिची नै रहेका हुन्छन् l यदि हामीले सेल्फी खिच्ने तरिका जानौं भने वास्तवमै हाम्रो फोटो सुन्दर देख्नका साथ साथै आकर्षित पनि देखिन्छ l त्यसैले आउनुहोस् चर्चा गरौँ कसरी खिच्ने त उत्कृष्ट सेल्फी? सेल्फी खिच्दा अपनाउने गर्नुहोस् यी तरिका जसले गर्दा तपाइको सेल्फी... जारी राख्नुहोस...
यी सरल काम जसले बनाउँछ तपाईलाई चाँडै करोडपति
भाद्र १२ । आरामको जीवन जिउनका लागि मानिसहरु दैनिक काम गर्छन् । तर भनेजति पैसा कमाउन (बचत गर्न) सक्दैनन् । यो आलेखमा यस्ता केही सजिला कामबारे उल्लेख गरिएको छ, जसमा तपाईले धेरै मेहनत नगरी करोडौं कमाउन सक्नुहुन्छ ।ब्लग : घरमा आरामले बसेर तपाई ब्लगबाट करोडौ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ । यसको लागी तपाइमा रचनात... जारी राख्नुहोस...
यदी कुनै युवतीले युवकलाई मन पराउँछिन् भने देखाउँछिन् यस्तो व्यावहार
भाद्र ९ । केटीलाई घुरेर हेर्ने मात्र होइन, आँखा झिम्क्याउन, जिब्रो पड्काउनसम्म पछि पर्दैनन् । उस्तैले त ‘आई लभ यू’ नै भनिदिन्छन् । तर, केटीहरुको हकमा यो लागू हुँदैन । केटीहरु स्वभावैले लजालु हुने भएकाले केटाहरुलाई जिस्क्याउने त आँटै गर्दैनन् ।बाटो हिँडिरहेको कुनै पुरुष मन पर्‍यो भने उनीहरु खुलेर व्य... जारी राख्नुहोस...